खुशीको खबर: सामान्य लेखपढ भएकोलाई अमेरिकामा काम गर्ने सुनौलो सुवर्ण अवसर, यसरी भर्नुहोस् भिसाको लागि आवेदन !! – Nepal Online Khabar
March 5, 2021 195
अमेरिकाले कामदार (ए’चवान बी भिसा) खुल्ला गरेको छ ।आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तो’किएको अ’वधिभित्र आ’वेदकले अनलाइन द’र्ता गराउनु पर्नेछ । नेपाली समय अनुसार फागुन १८ गते देखि चैत्र ७ गते दिउँसो १२ बजेदेखिसम्म द’र्ता गर्ने समय तो’किएको छ ।
पहिलोपटक अमेरिकी रोजगारदाताले क्ष’मतावान उच्च शिक्षा प्राप्त कामदारहरुका लागि अ’नलाइनमार्फत र’जिस्ट्रेशन गर्न पाउने भएका छन् । ब्या’चलर डि’ग्री गरेकाहरुका लागि ६५ हजारको कोटा रहेको छ
भने अमेरिकामा मा’स्टर्स डि’ग्री गरेकाहरुका लागि २० हजारको कोटा रहेको छ । तर अमेरिकामा मा’स्टर्स डि’ग्री गरेकाहरुले ६५ हजारको को’टामा समेत भा’ग लिन पाउनेछन् ।पुरा तरीका, सम्पर्क र जानकारीको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
Posted in अन्तरास्ट्रिय, ताजा खबर
Prevउसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालोलाई पनि २० मिनेटमा गोरो बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस
Nextप्रेमिकालाई फकाउन ‘लभ आइल्याण्ड’ नै बनाए, प्रेमिका त आइनन् तर पर्यटक आउन थाले
नेपाल–भारत निगरानी संयन्त्रको बैठक सम्पन्न, सम्बन्ध सुधारतर्फको पहल…हेर्नुहोस।